Stranger Things 'Caleb McLaughlin သည် Miles Morales ၏ပုံသဏ္newာန်အသစ်နှင့်လိုက်ဖက်သည် - သူစိမ်းများ
Stranger Things ကြယ်ပွင့် Caleb McLaughlin သည်ပုံရိပ်အသစ်တွင် Miles Morales အနေဖြင့်လိုက်ဖက်သည်
Los Angeles, California - ဇန်နဝါရီ 19: Caleb McLaughlin, ကယ်လီဖိုးနီးယား, Los Angeles မှာ, 2020 Shrine ခနျးမှာ 26th နှစ်ပတ်လည်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များအစည်းအရုံးဆုပေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Leon Bennett / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
သငျသညျ DVD အပေါ် Netflix မူရင်းဝယ်နိုင်
ဒီတနင်္ဂနွေမှာ Netflix မှာရုပ်ရှင် ၅ ခုကြည့်ရမယ်။ အပြင်ဘက်ကကြိုးနဲ့အခြားအရာများ ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Cecil ဟိုတယ်၌ပျောက်ဆုံးခြင်းအကြောင်း?
Caleb McLaughlin သည်ဓာတ်ပုံအသစ်တွင် Miles Morales ဖြစ်သည်
ယခုအချိန်တွင် Marvel နှင့် Sony တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြေငြာခဲ့သည် Spider-Man 3, ရုပ်ရှင်ထဲတွင်မည်သည့်ဇာတ်ကောင်များပေါ်ထွက်လာမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟလများပျံ့နှံ့နေသည်။ အသစ်သောသတ္တုများပုံသွန်းကောလာဟလနှင့်အတူ Miles Morales နောက်ဆုံးတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့အစဉ်အဆက် - ကြီးထွားလာသွန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူ၏ MCU ပွဲ ဦး ထွက်စေခြင်းငှါရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ ထင်ကြေးရောက်လာပြီ။
ပရိသတ်များအနေဖြင့်ချစ်မြတ်နိုးရသည့် Marvel ဇာတ်ကောင်သည်သူ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပွဲကိုပြသမည့်အခွင့်အလမ်းကိုစောင့်ဆိုင်းလျက်စောင့်ကြည့်နေကြပြီး Marvel သည်မည်သူမည်ဝါ၏အခန်းကဏ္playတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုခန့်မှန်းမှုများများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Marvel ပန်ကာရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူအများအပြားသရုပ်ဆောင်များကိုများထဲတွင်ဖြစ်ခဲ့သည် သူစိမ်းများ သရုပ်ဆောင်ကာလက် McLaughlin ။
အဖြစ် သူစိမ်းများ ပရိသတ်များသိသည်, သူကျိန်းသေအခန်းကဏ္ for များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်လိမ့်မယ်နှင့်အခန်းကဏ္ to မှဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသောရောနှောဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မယ် - ရှည်လျားရုပ်ပြအတွက် Miles နှင့်ဆက်စပ်ဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ခု။ ဘာမှမကြေငြာသေးဘူးလားဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမကြေငြာသေးပါဘူး။ Miles ကကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်မှာပွဲထွက်တော့မယ်ဆိုတာကိုတော့တစ်ယောက်မှမထားပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့မှာ McLaughlin ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့အနုပညာလက်ရာများမှအကူအညီအချို့ကြောင့်အခန်းကဏ္inတွင်မည်သို့မည်ပုံရှိမည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။
Caleb McLaughlin သည် MCU ရှိ Miles Morales ကဲ့သို့မည်ပုံရနိုင်သည်
မိုင် Morales ၏ဇာတ်ကောင်ပထမ ဦး ဆုံး 2018 ရဲ့၌သူ၏ရုပ်ရှင်ပွဲ ဦး ထွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ Spider-Man - ပင့်ကူ - အခန်းငယ်ထဲကို Sony ရဲ့အော်စကာဆုရကာတွန်းကားမှာသရုပ်ဆောင် Shameik Moore ကသူ့အသံကိုထုတ်ချေး သူ၏လူကြိုက်များမှုမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်မျက်နှာပြင်ကြီးသို့မရောက်ရှိခင်အချိန်သည်ကိစ္စသာဖြစ်သည်။ McLaughlin သည်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာရှင် death.steak_art, ဘယ်သူဖန်ဆင်းသည် မိမိအ high-end concept ကိုအနုပညာနှင့်အတူမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များတွင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် မကြာသေးမီက Instagram ကိုခေါ်ပြီး Miles Morales ကိုမြင်ကွင်းကြီးမှာပြန်ပြီးအသက်ဝင်စေဖို့ Caleb McLaughlin ဘယ်လိုပုံပေါက်ရမလဲဆိုတာကိုသိစေရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
မယုံနိုင်စရာပန်ကာတည်းဖြတ်မှုအတွက် သင်ဒီမှာစစ်ဆေးနိုင်သည် McLaughlin Miles '' အထင်ကရအနက်ရောင်နှင့်အနီရောင် Spidey- ဝတ်စုံကိုတက်ကိုက်ညီ။ ဝတ်စုံ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာစံနမူနာယူစရာမလို။ McLaughlin ကဇာတ်ကောင်ကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းထားသည်။
McLaughlin အခန်းကဏ္ for များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်သံသယရှိခဲ့လျှင်, ပန်ကာအနုပညာကျိန်းသေသူ Miles '' စူပါဝတ်စုံကိုဖြည့်နိုင်စွမ်းထက်ပိုပါတယ်သက်သေပြပုံရသည်! အခုငါတို့အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။
နောက်တစ်ခု:Stranger Things မှမင်းသမီး Leia အဖြစ် Millie Bobby Brown ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ပါ
Netflix Life: Streaming TV Podcast ပေါ်မှလိုပဲနားထောင်ပြီးစာရင်းသွင်းပါ Spotify , Google, နှင့် ပန်းသီး ။
အိပ်ချင်ဆွန်း 2016 အတွက်ဟယ်လို
ဆယ်ကျော်သက် mom,2ရာသီ 8 hulu
Netflix ၏ CEO သောသူသည်
shannara ရာဇဝင်ရာသီ2hulu
ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးက start ၏ 3rd ရာသီမရသောအခါ
သင်တစ် ဦး ရာသီ4နာရီအွန်လိုင်းဖြစ်ကြသည်